Kutheni ungekhe ukope nje iAmazon.com | Martech Zone
Kutheni ungekhe ukope nje iAmazon.com
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 2, 2010 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 Travis Smith
Iqela leTuitive lisazama ukuhlala phantsi emva kwalo nyaka UMzantsi nguMzantsi Ntshona uyasebenzisana (SXSWi) inkomfa ngo-Matshi. Sonke saba nexesha elimnandi kwaye safunda okuninzi malunga noluntu olunxibelelanayo kunye noko kuzayo. Kwakukho iiseshoni ezininzi ezinomdla ezivela kwiqela lenjongo kunye neqela leGmail ukuya
Ukupheka iiNerds, uninzi lwazo luye lwavela kwi-Intanethi. Ndifuna ukwabelana ngenye yam yam intandokazi.
Ukutyhila ubuncwane boYilo olusuka kwiAmazon nguJared Spool
UJared Spool yinkokheli kwilizwe lamava omsebenzisi, ngakumbi kwindawo yophando. Ebesebenza naye Amazon.com iminyaka emininzi, ukuhlalutya iipateni zabo zendlela kunye nokuzama ukuphucula amava omthengi wabathengi baseAmazon. Intetho yakhe yayinamanqaku amabini aphambili.
Uye wakhankanya izinto ezinomdla ezenziwa yiAmazon ngeempawu ezintsha kunye nokuphumeza rhoqo utshintsho oluncinci ukuphucula amava omsebenzisi.
Ubuye waxoxa ukuba awukwazi ukwenza izinto ezifanayo neAmazon kwaye ulindele ukuba uphumelele.
Kutheni le nto singenako sonke ukukopa iAmazon? Ngegama elinye "ukugcwala."
IAmazon ineendwendwe ezingama-71,431,000 ukusukela ngoDisemba ka-2008. Bakhonze abathengi abangama-76,000,000 ukusukela oko basungula. Kukho ii-odolo ezingama-24 ezibekwe rhoqo kwisibini. Ngaba iwebhusayithi yakho inayo olo hlobo lweenombolo zendlela?
Owona mzekelo ubalaseleyo kaJared usebenzisa uphononongo olwenziwe ngumsebenzisi. Uninzi lwabantu lufumana uphononongo lube luncedo kakhulu xa uthenga i-Intanethi, kwaye uphononongo lomsebenzisi kwiAmazon luthathelwa ingqalelo kakhulu. Ke kutheni ungenakongeza nje uphononongo lomsebenzisi kwindawo yakho? UJared ucaphula uphando olubonisa ukuba kuvavanyo olungaphantsi kwama-20 malunga nemveliso akuncedi abantu bathathe isigqibo sokuba imveliso yile nto bayifunayo. Ngamanye amaxesha kunciphisa umbono oqinisekileyo wento leyo.
Uyaqhubeka nokwabelana ukuba kuphela malunga ne-1 1,300 yabathengi ababhala uphononongo. Cinga malunga nokuba zingaphi iimpendulo kwi-Intanethi ozibhalileyo xa kuthelekiswa nokuba zingaphi ozifundileyo. Ke ukuze ufumane uhlolo olungu-20 ukunceda ukuthengisa into kuya kufuneka ukuba ube ne-1.3 yezigidi zabantu abathenga into. Ngubani.
Ndiyakukhuthaza ukuba ubukele Inkcazo kaJared (bona ngezantsi). Ulumke kakhulu kwaye kulula ukumphulaphula.
Ndiyakukhuthaza ukuba uqiniseke ukuba uhlala uphucula iimveliso zakho ezikwi-Intanethi ngeendlela ezenza eyona nto ibalulekileyo kwindawo yakho. Yonke indawo yahlukile, inabasebenzisi abohlukeneyo kwaye abo basebenzisi baneemfuno ezahlukeneyo. Akukho phawu lomlingo wempumelelo kwi-intanethi. Olona hlobo kuphela lokuqinisekisa ukuba impumelelo yakho kukumamela abasebenzisi bakho, kwaye uqhubeke uphucula izixhobo abazidingayo ukuze bagqibezele imisebenzi yabo.
Weebly: NgokuSisiseko ngokuLula ukuHamba kweSiza kunye neCMS